राष्ट्रपतिलाई निर्मलाको आमाको प्रश्न: निर्मलाको जस्तै तपाईको छोरीलाई गरेको भए कस्तो लाग्थ्यो ? [भिडियो] - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»राष्ट्रपतिलाई निर्मलाको आमाको प्रश्न: निर्मलाको जस्तै तपाईको छोरीलाई गरेको भए कस्तो लाग्थ्यो ? [भिडियो]
राष्ट्रपतिलाई निर्मलाको आमाको प्रश्न: निर्मलाको जस्तै तपाईको छोरीलाई गरेको भए कस्तो लाग्थ्यो ? [भिडियो]
By पूजा बानियाँ on २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:१९ भिडियो
काठमाडौँ: बलात्कारपछि हत्या गरिएका १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई चाँडो खोजी गरेर कारवाही गर्न माग गरिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजना गरिएको साक्षात्कारमा पन्तका आमाबाबुले निर्दोष छोरी निर्मलाको हत्यारालाई चाँडो पत्ता लगाएर कडा कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।
निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्तले हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो । “प्रहरी मेरो साथी भनेर नारा लगाइन्छ तर दुःख पर्दा प्रहरीबाट असहयोग हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
छोरी हराएपछि तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्दा प्रहरीले घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न आलटाल गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।